Ejipta: Shaaban Mihira An’i Obama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2018 2:13 GMT
Namoaka hira vaovao iray momba ny filoham-pirenena amerikana vao voafidy, Barack Obama i Shaaban Abdel Rehim, mpihira ejiptiana tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mpitolona, amin'ireo lohahevitra toy ny olana ara-tsosialy sy ara-politika.
Mitanisa an'ireo resak'i Dr Hasan Qayed al Subaihi momba ilay mpihira, ny blaogy Rag. Mpampianatra-mpanampy amin'ny siansan'ny serasera ao amin'ny Anjerimanontolon'i Emirà Arabo i M. al Subaihi, ary manoritsoritra azy toy izao [amin'ny fiteny anglisy]:
Ejiptiana mpihira malaza i Shabaan Abdel Raheem izay nampiroborobo ny endrika nolovaina avy amin'ireo mpihira nentin-drazana avy amin'ireo faritra ambanivohitra ejiptiana. Nandritra ny taona marobe, niasa tamina trano iray fipasohana lamba izy, no sady nitahitry ihany ireo talenta amin'ny maha-artista azy ho an'ireo manodidina azy. Ankehitriny, alefa manerana an'i Ejipta sy amin'ireo tany arabo rehetra ny hirany. Manana tonony latsa-paka ao ampon'ireo arabo ireo hirany, izay marobe no mankafy azy noho ny fahatsorany.
Namorona hira momba an'i Isiraely izy, mikasika ny fakàna an'i Palestina sy ny ady tao Iràka ary ankehitriny, mikasika an'i Barack Obama. Ireo tonony mahasarika amin'io hira io, izay ny lohahevitra dia ny Filoham-pirenena vaovao ao Etazonia, dia tsy manao afatsy mampiseho ny tombontsoan'ny tontolo arabo amin'ny fitondran'i Obama amin'ny ho avy.
Manoratra mikasika an'io lohahevitra io ihany koa i Zeinobia, eto [amin'ny fiteny anglisy]:
Nadikan'i Zeinobia ao anaty lahatsorany ho amin'ny fiteny anglisy io hira io .
Manohy ny blaogy The Rag:
Talohan'ireo fifidianana ho filoham-pirenena amerikana, ny ankamaroan'ireo arabo dia nanohana mafy an'i Obama avokoa ary nametraka fanantenana betsaka tamin'ny fahaizany mandray anjara amin'ny famahana ny toe-draharaha ao Iràka sy ny fanelanelanana eo amin'ireo Arabo sy ireo Isiraeliana. Tonga io fanantenana io taorian'ireo zavatra marobe niainana taloha nandiso fanantenana ka nitarika an'ireo Arabo hieritreritra fa manohana an'i Isiraely foana i Etazonia, noho ireo antony maromaro.
Amin'izao fotoana izao, mizarazara ho karazany ampolompolony maro ny hevitry ny vahoaka arabo mikasika an'i Obama. Ny vondrona lehibe dia ilay avy amin'ireo izay mieritreritra fa tsy misy governemanta amerikana mihitsy hampiseho ny marina amin'ireo Arabo, mikasika ny fifandonana misy amin'izy ireo sy ny Isiraeliàna.
Taorian'ireo fifidianana, io vondrona io ihany no nanomboka nanaporofo hevitra feno tsy fahatokiana. Mitovy hevitra izy ireo fa tsara kokoa ny miatrika fahavalo efa fantatra, toa izay mpifanandrina miafina sy misaron-tava (izany no fiheveran'izy ireo an'i Obama). Niely io fitsaratsarana ratsy io raha vao nifidy an'i Rahm Emanuel, jiosy namany, ilay Filoham-pirenena vao voafidy, nofidiany ho filohan'ny kabinetra ao amin'ny Trano Fotsy.
Manana fifandraisana matanjaka amin'i Isiraely i Emanuel, na azy manokana izany na amin'ireo fianakaviana, izay manamafy ny fihevitr'ilay vondrona hoe ny Trano Fotsy eo ambany fitantanan'i Obama dia hanohana betsaka hatrany an'i Isiraely raha oharina amin'ny fony teo ambany fitantanan'i Bush. Hihamafy ireo ahiahy ireo raha toa i Obama manendry olona jiosy hafa, amin'ireo toerana stratejika eo amin'ny fitantanany. Taorian'ireo zavatra nandiso fanantenana niarahana tamin'i Henry Kissinger, Dennis Ross sy Madeleine Albright, marobe ankehitriny ireo arabo no miandry zava-doza miaraka amin'i Emanuel.